Ma kugu adag tahay inaad la qabsato waqtiyada adag? Dhammaanteen waxaan ku dadaalnaa inaan wax ku ool ku noqonno cadaadiska, laakiin inta badan waxaan lumineynaa marka aan wajaheyno walaac ama dhibaato. Adoo dhisaya adkaysigaaga, waxaad si fudud ula qabsan doontaa caqabadaha cusub waxaadnaheli doontaa xirfad waxtar u leh loo shaqeeyaha. Tababarkan, Tatiana Kolovou, oo ah borofisar ka tirsan Iskuulka Ganacsiga ee Kelley iyo tababaraha xiriirka xirfadeed, ayaa sharxaya sida dib loogu soo kabto daqiiqad adag ka dib adoo xoojinaya "marinkaaga adkeysiga". Waxay soo bandhigeysaa shan farsamooyin tababar oo loogu talagalay diyaarinta xaaladaha adag iyo shan istiraatiijiyadood oo looga fikiro iyaga ka dib. Soo ogow halka aad ka taagan tahay miisaanka adkeysiga, cadee hadafkaaga oo baro hababka lagu gaaro.
Samee adkeysi Diisambar 12, 2020Tranquillus
READ Caqabada Emilie: inay ku laabato jacaylkeedii ugu horeeyay 8 bilood ilaa maalinta
horeWaxyaabaha lagama maarmaanka u ah Kooxaha
socdaJeff Weiner - Maareyn naxariis leh